ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်သလဲ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်သလဲ..
Posted by လူကလေး on Jan 17, 2013 in Relationships & Family | 33 comments
ဒီစာလေးကိုရေးတာ ဒါဟာ နှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ တင်တာကတော့ ပထမဦးဆုံးပါ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းပဲကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြန်ရေးရတာတော်တော် စိတ်ပျက်ရပါတယ်။ လက်လှမ်းမီတဲ့ Technician တွေကတော့ Word ကတစ်ခါတစ်လေမှာ ကြောင်တတ်တယ်ပြောပါတယ်။ ရေးပြီးသွားတဲ့ စာလေးတစ်စောင်ကတော့ ပျက်သွားပါပြီ။ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အပြင် ငိုတောင်ငိုမိပါတယ်။ ငါ့ကျမှ ဖြစ်ရလေခြင်း ဆိုပြီး ရေးထားတဲ့ စာလေးကို အရမ်းကိုနှမြောမိပါတယ်။ ခုထပ်ပြီးရေး မယ့် အခုနကလေးတင် ရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာဟာ အခုနကလောက် ကောင်းပါ့မလား။ မကောင်းနိုင်တော့ဘူးလား ။ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ သေချာမသိပေမယ့် ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။
ဒီအကြောင်းအရာလေးကို ရေးဖို့အတွေးလေးထဲရောက်လာတာက ဦးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ဆရာတော် အရှင် ဆေကိန္ဒရဲ့ ကလေးတရားမှာလုပ်တဲ့ သားသမီး နဲ့ မိဘကြားမှာ ရှိတဲ့အဖုအထစ် လေးတွေ ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတဲ့ ဆွေးနွေးခန်း ဗွီဒီယိုလေးကို ကြည့်မိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိဘနဲ့ သားသမီး ကြား အမြင်မှားနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကို မကွယ်မဝှက်တမ်း ရင်ဖွင့်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားတဲ့ပွဲလေးတစ် ပွဲပါ။ ….အင်မတန်မှ ကောင်းပါတယ်။ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ကြတဲ့ လူငယ်တွေက ပြောလည်းပြော၊ ငိုလည်းငို……။ ….မိဘတွေက လည်း ပြန်ရှင်းပြကြ၊ ငြင်းကြ နဲ့ တကယ်ပဲ စိတ်ဝင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ခံစားနေရတဲ့ သားသမီးနဲ့ မိဘကြားမှာ ရှိတဲ့ တစ်ချို့တစ်ချို့သော အဖုအထစ်လေးတွေနဲ့ တူတဲ့၊ ကိုယ်နဲ့ခံ စားချက်ချင်း တူတဲ့လူငယ်အများစု ကိုလည်း တွေ့လိုက်ရပါတယ်…………….။
အခုကတော့ အဲဒီထဲက တစ်ခုအကြောင်းကို ရေးပြချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲဗွီဒီယိုလေးထဲက အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ မိဘတွေက သားသမီးတွေကို ညီတူညီမျှ မချစ်ဘူး ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားချက်ကိုရင်ဖွင့်သွား တဲ့ လူငယ်မိန်းကလေးကတော့ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုပြီးပြောပြလိုက်တာ .. သူ့ကိုကြည့်ပြီး သူ့ခံစားချက်ကိုနားလည်လို့ မျက်ရည်ဝဲရတဲ့အထိပါပဲ.. မိဘတစ်ဦးကလည်း ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်ရကြောင်း လက်သီးလက်မောင်းတန်းလို့ ပြောသွားလေရဲ့.
. ရေးချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ စပါပြီ။ ဒီခံစားချက်မျိုးကို မောင်နှမတွေရှိတဲ့ လူငယ်အများစုမှာ သာ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိမှာပါ။ တစ်ဦးတည်းသော သားသမီးတွေကတော့ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ခံစားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခံစားရရင်လည်း သူတို့တွေလောက်မပြင်းထန်ပါဘူး.. မိဘတွေဟာ ဘယ်သားသမီးကို မဆိုတန်းတူချစ်တယ်.. ညီတူမျှတူချစ်တယ်.. အားလုံးတူတူပဲ.. စသဖြင့် အမြဲ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်.. ချစ်လိုက်တာမှ တုန်လို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တူညီတဲ့အချစ်မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး..။အဲဒီလိုပြောလိုက်ရင်လည်း သူတို့ အလွန် စိတ်ဆိုးပြီး မဟုတ်ကြောင်းကို ရှင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို ကြုံဖူးတဲ့သူတွေ ရှိမှာပါ။ တစ်ချို့ကတော့ လိမ္မာတဲ့ အလိမ္မာတုံးလေးမို့၊ တစ်ချို့က ဆိုးတဲ့ လူတေ လေးမို့၊ တစ်ချို့ကျ အကြီးဆုံးမို့၊ တစ်ချိုကျ အငယ်ဆုံးမို့၊ တစ်ချို့ကျ စာတော်လို့၊ တစ်ချို့ကျ ညံ့လို့ ၊ တစ်ချို့ကျ ချူချာလို့ စသဖြင့် ပုံစံတစ်မျိုးစီတိုင်းကို မိဘတွေက ချစ်ကြပါတယ်။ အားလုံးကို သူ့အခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီး ချစ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ့်မိသားစု ထဲမှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါလာခဲ့မယ်ဆိုပါစို့။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ သူကို ပိုလို့ဂရုစိုက်ရမှာ ဓမ္မတာ ပါပဲ။ ဒါကို ပိုချစ်တာကလည်း သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေက အတူတူပဲလို့ပြောဦးမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ကိုယ်က နားလည်ပေးနိုင်ရမယ်။
.. ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိစ္စကြီးငယ်ကြုံတဲ့အခါ မိဘများကပဲ ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းရတာပဲမဟုတ်လား……………။ မောင်နှမ အချင်းချင်း ပိုချစ်ခံရတယ် လျော့ချစ်ခံရတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အခါ မိဘကို ပြောပြပြီး မခံစားစေပါနဲ့။ သားသမီး တစ်ယောက်ရသင့်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်သင့်တဲ့ အချစ်မျိုးကို ဘယ်သားသမီးမဆို ရထားပြီးသားပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မိဘတိုင်းကပေးပြီးသားပါပဲ။ တောင်းယူစရာလည်းမလိုပါဘူး။ ပိုချစ်တယ် မမကိုပိုချစ်တယ်.. ကိုကို့ကိုပိုချစ်တယ်. အငယ်လေးကိုပိုချစ်တယ်.. ဒါတွေကတော့ သူတို့လေးတွေရဲ့အတိတ်ဘဝက အကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ သားသမီး ဖြစ်ပါစေ .. မိသားစုထဲမှာ အချစ်ဆုံး အသည်းတုံး လေးတွေဖြစ်နေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ရှေးဘဝက ကုသိုလ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ဒီဘဝမှာ ဒီမိဘ ဒီမောင်နှမတွေနဲ့ဆုံရတဲ့အခါမှာ မိဘတွေဆီက ရတဲ့မေတ္တာဟာ တူတူပါပဲ။ မောင်နှမတစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် ရပုံချင်းတော့ ကွာခြားသွားပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ခံရပုံချင်းဟာလည်း ကွာခြားသွားပါလိမ့်မယ်။ ရှေးအတိတ်က ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ခုဘဝမှာ ခံစားရတာ ၊ စံစားရတာချင်း တော့ ဘယ်မောင်နှမ မှ ယှဉ်လို့မရပါဘူး။
ဒါကြောင့် မိဘတွေမှာ ပိုချစ်တဲ့ သားသမီးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါက ပိုချစ်ခံရတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ အတိတ်ကုသိုလ် ကံကောင်းခဲ့လို့ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကတော့ အချစ်ခံကြရတာပါပဲ။ မေမေက ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်တယ်. ဖေဖေက ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်တယ်.. သားသမီးချင်း ဘက်လိုက်တယ်. .. ဆိုတာတွေကို မိဘတွေကို ပြောရင် ဘယ်တော့မှ လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး. . ရှိပါလိမ့်မယ် ပိုချစ်တဲ့သူဆိုတာ..ဒါပေမယ့် လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါတွေကို ဖေဖေမေမေတို့နဲ့ ငြင်းနေမယ့်အစား ဖေဖေမေမေတွေကို ပဲ နားလည်ပေးလိုက်ပါ။
ငါ့နဲ့ထိုက်တဲ့ မေမေတို့ဆီက မေတ္တာကို မွေးကတည်း ကငါ ရထားတာပဲ.. ငါ ထိုက်သလောက် ရတာလို့တွေးနိုင်အောင် တွေးပြီး နေတဲ့အခါ မိဘတွေနဲ့လည်း အငြင်းမပွားရတော့ပါဘူး.. ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီလိုတွေးလိုက်မိလို့ နေရထိုင်ရ အင်မတန်မှ သက်သာပါလိမ့်မယ် ………။ .. စိတ်လည်းမညစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ခံစားချက်တွေကိုလည်း နားလည်မှုနဲ့ အနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပါတယ်.ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့လို့သာပြောပါမယ်.. … . ဖေဖေနဲ့ မေမေ့ကိုလည်း အရမ်းချစ်ပါတယ်လို့.. ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်လဲတော့ မပြောတော့ဘူးနော်..
ဒီအကြောင်းလေးပါပဲ.. နှစ်ခါထပ်ရေးရတယ်ဆိုတာ.. ဒီရွာလေးထဲကို ပထမဦးဆုံး ခြေချမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူကလေး has written 16 post in this Website..
View all posts by လူကလေး →
မွန်ကစ်မှာလည်း အဲလို ခံစားချက်(မိဘချစ်ချင်းလျော့ခံရသူ) မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်…
လူကလေး ဖြေတွေးခိုင်းသလို တွေးမိပြီး မိဘများအပေါ်နားလည်ပေးခဲ့လို့ ခံစားချက်တွေ လျော့နည်းပြီး မွေးကျေးဇူး၊ ကျွေးကျေးဇူးတွေ သူတို့ရှိစဉ် တာဝန်ကျေနိုင်သလောက် ကျေပွန်ပေးခဲ့ပါတယ်… ဒါ့ကြောင်း နှောင်းမှ ရတဲ့ နှောင်းနောင်တ တွေ မရရှိခဲ့ပါဘူး….. ထပ်တူ ခံစား အားပေးသွားပါတယ်…
၁) ရေးထားတဲ့ မိဘ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဟုတ်ပါတယ် လို့ အပြည့်အဝ သဘောတူချင်ပါတယ်။
(ဟီး။ ခု အသက်ကြီးမှ ဒီလို စိတ်ထားနိုင်တာ။ ငယ်တုန်းက မောင်လေးကိုပဲ ပိုချစ်တယ်ဆိုပြီး ဝေးရာပဲ ပြေးချင်နေခဲ့တာ။)
၂) ရိုက်ထားတဲ့ စာတွေ ပျောက်သွားတဲ့ ခံစားချက်ကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ရေးချင်လို့ ရေးတဲ့ မုဒ် နဲ့ မဖြစ်မနေ ရေးရတဲ့ မုဒ် နဲ့ တခြားစီမို့ပါ။
၃) ရွာထဲမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ :hee:
Choose as right answer ဆိုရင် ဘာဖြစ်ပါသလဲ
Was this answer helpful + _ ဆို ရင် ဘာဖြစ်ပါသလဲ..
ဟယ်။ ခဏ လေး။
ဂဂ နန ရှင်းပြနိုင်တဲ့ သူတွေလာလိမ့်မယ်။
ကိုယ် ကြိုက်ရင် +
မကြိုက်ရင် – (တကယ် မနှိပ်နဲ့။ ဟိဟိ)
အဲဒီ အစိမ်းကြီးက ဒီ ပို့(စ) နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး၊ ဆိုလိုရင်းကို နားအလည်ဆုံး၊ အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကော်မန့်မျိုးကို ပေးရတာ။ (နားလည်သလောက်ပြောရတာ)
မပူပါနဲ့။ ဒီ လိုပဲ ဟိုလည် ဒီလည်နဲ့တတ်သွားတာပဲ။ သင်ပေးမဲ့သူတွေ ရှိပါသေးတယ်။ :harr:
ဟိုဟာလေးကလေ.. “ဂဃနဏ” ထင်ပါ့..
ဟမ်။ အဲ! ဟုတ်တယ်။
ပြင်လို့ ရတဲ့ အချိန်မှ ပြင်လိုက်တော့။
မိသားစုတွေ ကြားမှာ ရှိတဲ့ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်
မောင်နှမ တွေထဲမှာ ကျွန်တော်က အကြီးဆုံး
တစ်ခါမှ မိဘတွေက အငယ်တွေကို ပိုချစ်တယ်လို့ မမြင်မိသလို
ပိုချစ်တယ်ဆိုလဲ ငါ့ ထက် အငယ်တွေပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဘာမှ မခံစားရပါဘူး
မိဘတွေ ဘက်ကတော့ သား သမီး တွေ သွေးကွဲ မဲ့ အမြင်မှား စေမဲ့ အပြုအမှု အပြော အဆို မရှိအောင်တော့ ဂရုစိုက်ဘို့ လိုမယ် ( တချို့ မိဘ တွေက တမင် လုပ်တာ မဟုတ်ပေမဲ့ ၊ တစ်ယောက်ကို ပို ဂရုစိုက်တယ် ဆိုတာမျိုး လုပ်မိ သွားတတ်ကြတယ်)
ကျွန်တော့်မှာ သား နဲ့ သမီး ရှိတယ်
ဘယ်သူက ပို လိမ္မာတယ် ပိုတော်တယ် ဆိုတာမျိုး မပြောမိအောင် ဂရုစိုက်တယ်
တစ်ယောက်ကို ချီးမွမ်း မိရင် နောက်တစ်ယောက်ကို လဲ သတိတရနဲ့ ချီးမွမ်းလိုက်တယ်
ငယ်ဘ၀ က ရတဲ့ စိတ် ဒဏ်ရာက ကြီး မှ ရ တာထက် ဆိုးတယ်
မှတ်သားလိုက်နာသင့်တဲ့ နမူနာ အဖြစ် မှတ်ထားပါမယ်..
အိုးးးးး ကိုယ့်မိဘက .. ကိုယ့်ရဲ့အရင်းချာ ညီကိုမောင်နှမကို ချစ်တာ ဘယ်လိုပဲ ချစ်ချစ် .. ဘယ်တော့မှ ဂျေမ၀င်ခဲ့ဖူးဘူး ။
သူ့ကျတော့ ၀ယ်ပေးတယ် ၊ ငါ့ကျတော့ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလည်း တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူး ။ အဲ့ဒီအပေါ်လည်း ဖီလင်သိပ်မရှိဘူး … ။ ဒါကြောင့်အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ …
ဒါပေသိ .. ဂလောက် ကျေနပ်အောင် နေတတ်ခဲ့တာတောင်မှ … မိဘ အသည်းကျော်မဖြစ်ပဲ … ချဉ်ဖတ်ဖြစ်နေခဲ့ရတယ် …. ခိခိ … တစ်ခါတစ်လေ လူဂျီးတွေများ ဆယ်နှစ်မျိုးဟင်းချိုလိုပဲ .. နားကို လည်တော့ဘူး :harr:
မိဘက ကိုယ့်ကို ချစ်တာ မချစ်တာ၊ ပေးတာ မပေးတာ၊ ကိုယ့်မောင်နှစ်မသားချင်းကို ပိုချစ်တာ မချစ်တာ ထက် .. သားသမီးတစ်ယောက်နေနဲ့ … ဘာပြန်လုပ်ပေးနိုင်သလဲ .. ဘယ်လောက်တာဝန်ကျေခဲ့သလဲဆိုတာလေးလောက်ပဲ အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်မိပါကြောင်း …. ။
လူကလေး ပြောသလိုပဲ မိဘတွေက သားသမီးအားလုံးကို တစ်မျိုးစီချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အချစ်ဆုံးဆိုတာလည်း အများအားဖြင့် ရှိတတ်ကြမှာပါ။ ဒါကိုလည်း နားလည်ပေးနိုင်ရမှာဖြစ်သလို နားလည်းပေးနိုင်နေပါတယ်။ ကျမတို့မောင်နှမတွေထဲမှာ မေမေရောဖေဖေပါ ၂ယောက်လုံးရဲ့ အချစ်ဆုံးက ကျမ မောင်လေး အကြီးပါ။ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကတော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့။ ဆိုးတဲ့ တေတဲ့သူတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့အတွက် အဲဒါကြောင့်ပိုချစ်တာတော့ မဟုတ်တာသေချာတယ်။ အကြီးဆုံးလည်း မဟုတ်သလို အငယ်ဆုံးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အကြောင်းပြချက် မရှိဘူးလို့ထင်တာပဲ။ မိဘတွေအနေနဲ့ မောင်လေးအကြီးအပေါ်မှာ သိပ်ပြီးသိသာပိုမိုတဲ့ဂစိုက်မှုတွေ မရှိပေမယ့် မိဘတွေ့ရဲ့ စိတ်ကို ခံစားမိတာပါ။ အဲဒါကို လည်း ကျမအနေနဲ့ ယနေ့အထိ ဘယ်လိုမှမနာလိုစိတ် မကျေနပ်စိတ်မဖြစ်ဖူးတာ အမှန်ပဲ။ ကိုယ်က အကြီးဆုံးမို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျမသိသလောက်တော့ ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း အဲဒီအတွက် မနာလိုမကြည်ဖြူမရှိကြဘူး။ အားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲ။ မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ တန်းတူဆက်ဆံမှုရှိတာရယ် နောက် စီမံကွပ်ကဲမှုပုံစံတွေကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်။ သူစိမ်းမရှိသေးတာကြောင့်လည်း တစ်ကြောင်းပါကောင်း ပါမှာပေါ့။ အဲဒီလိုပြဿနာမျိုးတော့ မကြုံဖူးသေးဘူး။ ကြုံလည်း မကြုံချင်ဘူး။ အဲဒီလိုမဖြစ်အောင်တော့ တာဝန်အရှိဆုံး အကြီးဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ရမှာပေါ့။ ကြုံလို့တစ်ခုပြောဦးမယ်။ ကျမတို့ငယ်ငယ်က ကျမတို့ရွာက ဖြစ်ရပ်လေးပေါ့။ အဲဒီမိသားစုက ရွာမှာ ချမ်းသာတဲ့စာရင်းဝင်ပေါ့။ သားသမီးတွေ အများကြီးပေါ့။ အဲဒီအထဲကမှ အထက်အောက် သမီး၂ယောက်နဲ့မိခင်ရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပေါ့။ အကြီးက လယ်ထဲ ယာထဲအလုပ်မလုပ်ဘူး။ အိမ်မှာပဲ အိမ်မှုကိစ္စပဲလုပ်တယ်။ အငယ်က လယ်ထဲ ယာထဲအလုပ် လုပ်တယ်။ အိမ်မှာ ယက်ကန်းယက်တယ်။ ပဲပင်ပေါက်တို့ ရာသီပေါ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရောင်းပြီး သူ့ကိုယ်ပိုင် ငွေရှာတယ်။ စုမိတဲ့အခါ လယ် ယာ နိုင်သလောက်ဝယ်တယ်။ အဲဒီတော့ အိမ်ထောင်မကျခင်ကတည်းက သူ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်နေပြီ။ အကြီးက အဲဒီလိုကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း မရှိဘူး။ သူကအိမ်မှာပဲ အိမ်မှုကိစ္စပဲလုပ်ရတာကိုး။ အဲဒါကို မိခင်က သိပ်မကြည်ဘူးပေါ့။ အစကတည်းက သူတို့ချင်းက သိပ်မတည့်တာ ပိုပြီး မတည့်တော့ဘူးပေါ့။ မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရဘူး။ မိခင်ကလည်း အကြီးကိုပိုချစ်ပုံပဲ ညီအစ်မချင်း ပြဿနာဖြစ်လိုက်တိုင်း မိခင်ကလည်း သမီးအကြီးဘက်ကပဲ ဘက်လိုက်သလိုပေါ့။ အဲတော့ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးက ရန်သူတွေလိုပဲ။ အိမ်ထောင်မကျခင် မိဘအိမ်မှာကတည်းက အဲဒီလိုတွေဖြစ်နေတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းဆို စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။ အဲဒီလိုတွေမဖြစ်အောင် မိဘတွေဘက်ကလည်း သတိထားရမှာဖြစ်သလို စီမံကွပ်ကဲတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်ထင်ပါတယ်။ သားသမီးတွေဘက်ကလည်း နားလည်မှု သဘောထားကြီးမှုတွေထားရှိဖို့လိုပါတယ်။
၁)ဒါတွေကတော့ သူတို့လေးတွေရဲ့အတိတ်ဘဝက အကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂)ဒါက သူတို့ရဲ့ ရှေးဘဝက ကုသိုလ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃) ရှေးအတိတ်က ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ခုဘဝမှာ ခံစားရတာ ၊
၄) ဒါက ပိုချစ်ခံရတဲ့သားသမီးတွေရဲ့ အတိတ်ကုသိုလ် ကံကောင်းခဲ့လို့ပါဘဲ။
အောင်မြလေး.. ဒီလောက်စာတိုတိုလေးမှာ.. လေးနေရာတောင်.. “အတိတ်တွေဖိ”ရေးထားတယ်..။
အဲဒီကျိန်စာမိနေသူများကို.. “တယောက်ထဲနဲ့..၃ကိုယ်ခွဲလို့.. ပဋိပက္ခဖြစ်နေသူ”များ..ရယ်လို့..။
ဒီနေ့..ဒီလိုနေရာမှာ..လာရေးနေနိုင်တာ.. ရှေ့ရှည်ရှေရှေး… အတိတ်ကံကြောင့်မဖြစ်လို့..
အခုရေးထားတာတွေက..နောင်ဘ၀အတွက်.. ကောင့်ကောင်ကောင်ကောင်းအောင်လုပ်တာ.. မဟုတ်နေလို့..
မကြိုဆိုပဲ အတိတ်ကံနဲ့ အရင်ဖိတယ် ဝင်ပြောမလို့။ ရွာထဲ ဆက်မလျှောက်ရဲစရာ။ :harr:
မှတ်ထား။ အဲလာ ဒီရွာရဲ့ သူကြီးပဲ။ (သိပြီးသား ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်။ လိုလည်း မလိုလည်း)
မတော် ကိုယ့်တုန်းက ဒီလူကြီး သူကြီးမှန်း ပထမ ပို့(စ) မှာ သိဘူးရယ်…..
အောင်မငီး.. သူကြီး တဲ့..
ကျားရှေ့မှောက်လျက်လဲ .. ဆိုသလို သူကြီး ရှေ့မှ မှားလေရော့သလား..
ချောရီး.. တောင်းပန်ပါဧ။် ..
အသစ်တော် နဒူ လေးမို့ အပြစ်တော် မမြင်စေကြောင်း .. .
to: .. သူကြီး kai
အရေးအသားကို ဝေဖန်ပေးလို့.. ရှူးရှူး (ဟုတ်ပေါင် ) Thank you!
** ဂဇက် ရွာ က ပျော်စရာကောင်းလို့ ** ကျေးဇူး.. (လုံမလေးမွန်မွန်)
မိဘတိုင်းက သားသမီးတိုင်းကို အညီအမျှတော့ မချစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း လူကလေးရေးထားသလို အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ။ မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။
အဲ.. ရွှေတုတ်ကတော့ မိဘကညီမလေးတွေကို ပိုချစ်တာထက် ငါ့ကို ပိုချစ်တယ်လို့ ခံစားရတာပဲများတယ်။ တကယ်ပဲပိုချစ်တာလား။ ကိုယ်တွေးတဲ့ ပုံစံကြောင့်လားတော့ မသိပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုခံစားရတာများတာတော့ ကောင်းတာပေါ့နော်။
ရွာထဲကနေ ကြိုဆိုပါတယ်နော်။ လူကလေးရဲ့ ပထမဆုံးပို့စ်လေးကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ။
ချစ်တယ် … မချစ်ဘူး …
ဘယ်သူ့ကိုတော့ ပိုချစ်တယ် …
ငါ့ကိုတော့ သူ့လောက် မချစ်ဘူး ……
ကျုပ် သဘော ပြောရရင် …
ဒါတွေကို အရေးတယူ လုပ်နေတာကို …
ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်ချစ် ပေါ့ ….
အဓိက အားဖြင့် ….
သားသမီး ဘက်က ကြည့်ရင် …
မိဘရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပြန်ဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ …….
မိဘ တွေ ဘက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း
ရင်မှဖြစ်တည်လာတဲ့ သားသမီး တွေကို
ကောင်းရာမွန်ရာ ဖြစ်အောင် ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးဖို့ …
ဒီလိုပဲ ကျုပ်ကတော့ မြင်မိပါတယ် ……။
ကိုလူကလေးရေ……………. အစ်ကို့ရဲ့ ပို့စ်လေးက ငြိမ်းခံစားနေရတာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့ အရင်ဆုံးပြောပါရစေ………….. ငြိမ်းဆို အိမ်မှာ အဲလို အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်။ “မေမေက ဖီးဖီးကိုပဲပိုချစ်တယ်။ သမီးကိုကျတော့ မချစ်ဘူး။ သမီးကိုဆို အမြဲတမ်းဆူနေတာပဲ…..” စသဖြင့်ပေါ့နော်…….(ဖီးဖီးဆိုတာက ငြိမ်းရဲ့အောက်က ညီမလေးပါ။) ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူးလို့ တွေးလိုက်မိရင်ကို စိတ်ထဲမှာ အလိုလိုဝမ်းနည်းလာပြီး မွန်းကြပ်လာတတ်တာပါ…… အဲလိုပြောလိုက်ရင် မေမေဘယ်လိုခံစားသွားရမလဲဆိုတာ မတွေးမိပါဘူး။ ကိုလူကလေး ပြောသလိုပဲပေါ့နော် ပိုချစ်တဲ့သားသမီးဆိုတာ ရှိမှာပါပဲ။ မိဘတွေကို နားလည်ပေးဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်………. ကိုယ့်ကံကိုက အဲလိုပဲဆိုတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲနော်……….
မမကြီးတို့လည်း ငယ်ငယ်က မိဘအပေါ်မှာ အဲဒါကို အတော်လေး ပြသာနာ လုပ်မိတယ်။
ခုချိန်မှာသာ ရယ်စရာဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီအရွယ်တုန်းကတော့ အဲဒါက ကိုယ့်အတွက် ပြသာနာ အကြီးကြီးပဲနော်။
တကယ်တော့ မိဘတွေကလည်း ဒါကို သတိထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကလေးတွေကတော့ အဲဒီအရွယ်မှာ သိပ်ပြီးသိတတ်ဖို့ မလွယ်ဘူးလားလို့ပါ။
ဒီစာကိုလေ ငယ်ငယ်က ဖတ်မိလိုက်ရမှာ…
ငယ်ငယ်က အမြဲတမ်းထင်လေ့ရှိတယ်.. အဖေက သမီးကြီး မွန်မွန့်ကို ပိုချစ်ပြီး အမေက မောင်လေးကို ပိုချစ်တယ်လို့… အဲဒါကြောင့် အမြဲတမ်းလည်း အဖေ့ကို ပိုချစ်တယ်လို့ ဖြေဖူးတယ်…
အငယ်ဆိုတိုင်း အလျှော့ပေးစရာလိုလို့လားဆိုပြီးလည်း အမြဲတမ်းပြဿနာဖြစ်ဖူးတယ်… မောင်လေးကို အလျှော့ပေးလိုက်ပါလို့ ပြောတဲ့သူတိုင်းကိုလည်း ကလန်ကဆန်လုပ်ဖူးတယ်…
အခုတော့ ပြန်တွေးကြည့်မှ မှားမှန်းသိတော့လည်း ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေ..
ကိုယ်တိုင်မကြုံရတော့ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က သူငယ်ချင်းတွေဆီမှာ ဒီလိုအဖြစ်လေးတွေတွေ့ရင် ဒီစာလေးအကြောင်း ပြောပြလိုက်ပါမယ်လို့…
ဒါနဲ့ အပေါ်မှာ အနော့်နာမည်ကို တွေ့လိုက်တယ်နော်.. လူကလေးက ဘယ်သူများပါလိမ့်..
ကဲ အနော်.. လုံမလေးရေ
အနော်ကိုယ်တိုင်ကရေးချင်ရင် ဒီရွာထဲမှာ ရေးပါလားလို့ ပြောခဲ့တာလေ
.. သယ်ရင်း လုံမ တော်တော်လဲမေ့တတ်ပါစ..
ပထမဆုံး ပိုစ့် လေး မှာ ဘယ်သူမှ ချ မရေးဖူးသေးတဲ့၊ မိသားစုတိုင်း ကြုံဖူးတဲ့ အကြောင်း အရာလေး နဲ့ ၀င်လာတဲ့ လူကလေး ( ကျား ၊ မ မသိ) ကို ကြိုဆိုပါတယ်။
မိဘတွေ ရဲ့ အဲလို ခွဲခြား ဆက်ဆံ မှု တွေ ဟာ တခါတရံ သားသမီးတွေ ရဲ့ စိတ်ထဲ တသက်လုံး စွဲသွား ပြီး ကြီး လာတဲ့ အချိန်မှာ မောင်နှမ၊ ညီအမ၊ ညီအကို ချင်း သွေး ကွဲ မှု တွေ ကို ဦးတည် စေပါတယ်။ တချို့ က ခေါင်းထဲ သိပ် မထားပေမယ့် အချစ်မခံ ရဘူးလို့ အတွေး ရှိတဲ့ သူ တချို့ က ခံစားချက်ကြီး ကြပါတယ်။
အများအားဖြင့် သားသမီး ၃ ယောက် အထက် ဖြစ်နေရင် ၁ယောက်ကို ပို သာနေလည်း သိပ် မသိသာ ပေမယ့် ၂ ယောက် ၊ အထူး သဖြင့် ၊ ညီ အကို၊ ညီ အမ ( လိင်တူ) တွေ မှာ မိဘတွေ ရဲ့ ခွဲခြား မှု က သိသာတတ်တယ်။ အဲဒီ မှာ အလိုလိုက် ခံရတဲ့ သူကလည်း ပျက်စီးတတ် သလို ၊ အလို လိုက် မခံ ရတဲ့ သူ ကလည်း အရွဲ့ တိုက်ရင်း ပျက်စီးတတ်တယ်။ မိဘတွေ အတွက် သတိပြု စရာပါ။
မိဘက သားသမီးအပေါ် ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်တယ် ဘယ်သူ့ကိုတော့ လျှော့ချစ်တယ်လို့မရှိပါဘူး၊
ကိုယ်မွေးထားတဲ့သားသမီး ချစ်ခြင်းကတော့ အတူတူဘဲဖြစ်မှာပါ။
ချစ်တဲ့ ပုံစံတော့ တူချင်မှတူမှာပေါ့။
တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ သားသမီးထဲမှာ ပိုပြီးဂရုစိုက်ပေးရမဲ့သူ၊ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးရမဲ့သူရှိသလို သူ့ဖါသာသူလွှတ်ပေးထားရမဲ့သူ၊ လွှတ်ပေးထားလို့ရမဲ့သူလဲရှိမှာပါ။
အဲဒါကို သူ့ကျတာ့မပြောပဲ ငါ့ချည်းဘဲ အမြဲပြောနေတယ်ဆိုပြီး အမြင်မလွဲစေချင်ပါ။
မိဘတယောက်အနေနဲ့ ကတော့ သားသမီးတွေကို ဘယ်သူ့ကိုပိုတယ်လို့တော့မရှိပါဘူး…ဒါပေမဲ့လည်း အားနည်းသူကိုပိုပြီး ဖေးကူတာတော့ရှိတာပေါ့နော်…ကိုယ်ကတော့ အငယ်ဆုံးဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုတော့ ပိုပြီးအလိုလိုက်တယ်လို့ထင်တာဘဲ…ဒါပေမဲ့ အခုကိုယ်က မိဘနေရာရောက်လာပြီဆိုတော့လည်း သားသမီးတွေစိတ်ဝမ်းမကွဲအောင် သတိပြုရမှာပေါ့နော်…
မီးမီးလေးနဲ့ ဟိုလူဂျီး .. ဘူ့ကိုပိုချစ် ???
ဟဲ့ .. ခလေး ..
လူဂျီးဒွေ ဂျားဒဲ ..
အိုက်ဒါ တားပေါဒါ မီဟုတ်ဝူးး
ဟိုဒင်းဂ ပေါဒါ ဆိုလား ဘာလား ညာလား ..
ဟိုလူကြီးဆိုတာ နေမင်း ကို ပြောတာမို့လား ..
ဒါတော့ ရဘူးအေ.. ကြိုက်မှာ
ဟိုကောင်မလေးလဲ ကြိုက်တယ် .. ဝိုင်းစု .. အဟတ်ဟတ်. .
၀ါ့ဒ် ထဲဝင်ရိုက်ပြီးရင် ဆေ့ဖ် လုပ်လေ….။ မလုပ်ပဲနဲ့ x ကိုနှိပ်လိုက်မိရင် သိမ်းမှာလားလို့မေးတယ်….။ ဘာမှမလုပ်ပဲ ဖြုတ်ချလိုက်ရင် ပျက်ကရော…..။ ၀ါ့ဒ်ကို ဆေ့ဖ် မလုပ်နိုင်ခင် ကွန်ပြူတာက ရီစတပ်ဖြစ်သွားရင်လည်း ပျက်သွားတာပဲ…။ အဲဒိတော့ ရိုက်လက်စ ကတည်းက ဆေ့လုပ်ထား ပြီးရင်ထပ်ပြီးဆေ့ဖ်ထပ်လုပ်လိုက်…..။ ကျနော်ကတော့ စတစ်ထဲမှာ ဆေ့ဖ်လုပ်တယ်…။ ဆိုင်မှာထိုင်ရတာကိုး…။ သတိထားရမှာက ဆေ့မလုပ်သေးပဲ ကွန်ပြူတာ ပိတ်သွားတာ ရီစတပ်ဖြစ်သွားတာပဲ …….။